Shatiga Kireystayaasha Farshaxanka ee loo yaqaan 'Craft Growers licence' ee Gobolka Illinois - Sida loo Dalbasho Si Loo Koro Cannabis
Shatiga Kireystayaasha Farshaxanka ee Gobolka Illinois ayaa La Sharaxay
Waxaan haynaa Shatiga Farshaxanada alaabada halkan: Ka dhagayso PodCast ama Ka Daaw YouTube-ka ee Codsiyada Kordhinta Farshaxanka. Qaanuunka gaarka ah ee aan ka wada hadalnay- soo dejiso isku xirka hoose: Halkan Craft Gowers 'App & Scaniska Halkan.
Wac ku saabsan ruqsadda dhirbaaqayaasha dakaaga ee Illinois
Raadinta Macluumaadka Dhismaha - Halkan Riix Halkan.
Ganacsade macnaheedu waa xarun ay maamusho hay'ad ama ganacsi ay rukhsad u siisay Wasaaradda Beeraha si loo beero, u qallajiyo, u daweeyo, iyo xirmo xashiishadda una fuliso waxqabadyo kale oo lagama maarmaan ah si looga sameeyo xashiishadda iibka ah ee lagu iibin karo hay'adda wax lagu soo diro ama loo isticmaalo hay'adda wax ka shaqeysa. Beeraleyda farshaxanku waxaay lahaan karaan ilaa 5,000 cagood oo laba jibbaaran dhul balaaran oo ku yaal dhismaheeda dhirta ee ubaxa. Waaxda Beeraha ayaa oggolaan karta koror ama yareyn ubax dhul daaqsimeed oo ubax ah oo ka badan 3,000 oo fuudh labajibaar ah iyada oo la raacayo baahida suuqa, awoodda wax soosaarka ganacsatada, iyo taariikhda liisanka shatiga iyo u hogaansanaanta, iyada oo leh ugu badnaan 14,000 cagood oo laba jibaaran ku beero geedaha marxaladda ubaxa, oo ay tahay in lagu beero dhammaan heerarka korriinka ee ku lifaaqan oo aamin ah.
Su'aalaha iyo Jawaabayaasha Ruqsad Bixinta Illinois
Gobolka Illinois ayaa su’aalaha ka qaadanaya Codsadeyaasha shatiga shatiga Faneed.
Codsadayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay u soo gudbiyaan su'aalo qoraal ah Waaxda waaxyada laxiriirta arjiga, agabyada dalabka, ama habka dalabka. Waaxdu waxay ku soo dhejin doontaa jawaabaheeda laba maalmood sida ku xusan hoosta. Wasaaraddu waxay soo koobi kartaa su'aalaha la xiriira mana soo daabici doonto jawaabaha su'aalaha soo noqnoqda, su'aalaha aan la xiriirin nidaamka codsiga, ama su'aalaha qiyaasta qaaska ah.
Waaxda Beeraha ee Illinois waxay dhejin doontaa su'aalaha ay hesho iyo jawaabaha waaxda laba maalmood. Wareega koowaad ee jawaabaha, su'aalaha ay soo heshay waaxda 5: pm fiidnimo ee Janaayo 00, 14, waxaa lagu dhejin doonaa 2020:5 galabnimo Janaayo 00, 21. Wareega labaad ee jawaabaha, su’aalaha ay gaarayaan 2020:5 pm markay tahay Janaayo 00, 28, waxaa lasoo dhejin doonaa 2020:5 pm ee Feebarwari 00, 4. Waaxdu waxay dib ugaheli doontaa aqoonsiga su aalaha su'aasha lasoo dhejiyay iyo jawaabta. Wasaaraddu kama jawaabi doonto su'aalaha aan qorin ama su'aalaha la soo gudbiyey wixii ka dambeeya Janaayo 28, 2020. Su'aalaha waxaa loo gudbin karaa: AGR.AdultUse@illlorida.gov
Codsiga Shati-siinta Farshaxanka
J: Ku haboonaanshaha xarunta la soo jeediyey
Ku habboonaanta Codsadaha Xarunta la soo Jeediyay waa in: (1) la muujiyo in xarunta la soo jeediyey ay ku habboon tahay wax soo saar habboon oo badbaado leh xashiishadda; (2) muujiyo awoodda lagu haqabtiro baahida macaamiisha iyadoo lagu hawlgalinayo xarunta kobcinta farsamada qaab hab amaan ah oo hufan oo saameyn yar ku leh deegaanka iyo bulshada ku xeeran; iyo (3) in la bixiyo Qorshaha Ku Dhaqanka Hawlaha iyo Maareynta. Wadarta Guud: 75 Bogga Xadka: 50
B: Habboonaanta Qorshaha Tababarka Shaqaalaha
Ku habboonaanta Codsadaha Tababarka Shaqaalaha waa inuu: (1) sharxaa qorshe shaqaale oo bixin doona isla markaana hubin doona shaqaale ku filan oo khibrad u leh saacadaha shaqada ee la heli karo, soo-saaris badbaado leh, fayadhowr, amniga, iyo kahortagga xatooyada; iyo (2) siiyaan buug-gacmeedka shaqaalaha kaasoo shaqaalaha siin doona hage ku saabsan shaqada maamulka iyo siyaasadaha xarumaha. Dhibcaha Guud: 50 Xaddidaadda Bogga: 15, kuma jiraan nuqul buug gacmeedka la soo bandhigay
C: Qorshaha Amniga iyo Diiwaaninta
Codsaduhu waa inuu: (1) muujiyaa awoodda uu uga hortagayo xatooyada ama badalida xashiishadda iyo sida qorshuhu u caawin doono ISP, Waaxda, iyo fulinta sharciga maxalliga ah fulinta waajibaadka fulinta sharciga, oo ay ku jiraan caddeynta u hoggaansanaanta dhammaan qodobbada Qaybaha 1300.355, 1300.380 , iyo 1300.385 ee xeerarka degdegga ah; (2) in la muujiyo in qorshaheeda keydinta keydinta, dabagalka iyo la socoshada kaydinta, xakamaynta tayada iyo amniga iyo siyaasadaha kale iyo habraacyada ay yareyn doonaan howlaha sharci darrada ah, oo ay kujirto sharraxa qorshaha codsadaha ee iskuduubinta iyo tuurista xashiishadda cannabis ee aan la adeegsan ama ka badan ISP waaxda; (3) sharrax xiritaanka, xiritaanka xirmadan ee sugidda iyo keydinta xashiishadda iyo tallaabooyinka amniga ee Codsadaha, oo ay ku jiraan tallaabooyinka loogu talagalay goorta goobta ay u xiran tahay ganacsiga iyo tillaabooyinka la qaadayo si loo hubiyo in xashiishadda aysan u muuqan dadweynaha; (4) Codsaduhu waa inuu sidoo kale bixiyaa qorshihiisa si loogu dalbado laysanka gaadiid ama uu qorsheeyo inuu la shaqeeyo sharikad shati leh iyo qaababka si amaan ah oo aamin ah loogu keenayo xashiishadda iyo waxyaabaha cannabis ku faafa xarumaha ganacsiga cannabis. Waxaa jira dhowr waxyaabood oo cusub oo lagu daray qorshaha amniga cannabis qaar ka mid ah muuqaallada sare waa labadaba 90-maalmood oo laga duubayo onsite iyo 90 maalmood oo duubitaan daruur ah waa inay lahaataa gobolka. The koritaanka farsamada gacanta Illinois uma baahna in waardiye ammaan uu goobta joogo inta lagu jiro saacadaha hawlgalka. Qodobbada ATotal: 145 Xadka Xadka: 65
D: Qorshaha beerista
Codsaduhu waa inuu: (1) sharxaa qorshahiisa siinta xashiishaad cannabis joogta ah, oo aan kala go 'lahayn oo la gaarsiiyo xarumaha diwaangashan; (2) muujiyo aqoonta hababka beero loo isticmaali karo, oo ay ku jiraan noocyada kala duwan ee loo beero iyo khibradda Codsadaha, haddii ay quseyso, iyadoo la sii kordhayo noocyadaas ama waxsoosaarka beeraha la midka ah; (3) waa in la muujiyaa tillaabooyinka la qaadi doono si loo hubiyo tayada xashiishadda cannabis, oo ay kujirto daahirnimada iyo joogtaynta, xashiishadda loo siin karo dawooyinka. Wadarta Guud: 75 Bogga Xadka: 50
E: Amniga badeecada iyo Qorsheynta calaamadaynta
Codsadaha Koriinka Farshaxanka waa inuu: (1) sharxaa qorshihiisa badbaadinta iyo baakaynta saxda ah iyo sumaynta xashiishadda; (2) waxay sharraxaysaa qorshaheeda ay ku tijaabineyso xashiishadda cannabis iyo hubinta in xashiishadda cannabis oo dhan ka xor tahay sunta. (3) sharraxaa qorshaheeda lagu aasaasayo soo-saarkii alaabada haddii ay dhacdo cillad soo saar ama cawaaqib xumada caafimaad ee macaamiisha, oo ay ku jiraan habab lagu aqoonsado badeecada, ogeysiinta dawooyinka iyo / ama macaamiisha, iyo tuurista alaabada la soo celiyay. Wadarta dhibcaha: 95 Bogga Xaddidan: 55
F: Qorshe Ganacsi iyo Adeegyada la Bixiyo
Codsadaha liisanka milkiilaha farsamada gacanta waa inuu: (1) siiyaa qorshe ganacsi oo sharraxaya sida farsamayaqaanku u qorsheynayo inuu ku hawlgalo qaab waqti-dheer ah, oo ay kujirto sharraxaad faahfaahsan oo ku saabsan qadarka iyo isha sinnaanta iyo ballanqaadka deynta iyo suuragalnimada maaliyadeed; (2) soo bandhiga iyo / ama sharraxa waaya-aragnimada codsadaha ama saraakiisheeda, xubnaha guddiga, ama ku-daneyaasha ay ku leeyihiin maareynta ganacsiga, warshadan, ama beeraha iyo beero, iyo inta ay le'eg tahay ku lug lahaanshahooda ama awoodda ay saameyn ugu yeelanayso hawl maalmeedka hawl-maalmeedka xarunta; (3) in la helo jadwal bilow ah oo bixiya waqti lagu qiyaasay ogolaanshaha ogolaanshaha ilaa hawlgal buuxa, iyo aasaaska qiyaasaha. Tani waa inay kujirtaa bayaan uu Codsaduhu ku muujin karo khibrad ama dhaqammo ganacsi oo kor u qaadaya xoojinta dhaqaalaha ee Aagagga Saamaynta Ku Yeeshay. Dhibcaha Guud: 110 Bog Xadka: 60
G: Codsadaha Sinnaanta Bulshada
Kuwani waa shuruudaha Codsiyada Sinnaanta Bulshada ee caadiga ah ee aan wax badan ku soo qorney - Riix Halkan wixii macluumaad dheeri ah ee la xiriira codsadaha sinnaanta bulshada ee liisanka farsamada gacanta.
200 dhibcood - majiro xaddidan bog.
H: Dhaqanka Codsadaha Shaqada iyo Dhaqanka Shaqada
Codsaduhu waa inuu: siiyaa qorshe si loogu helo jawi shaqo oo badbaado, caafimaad iyo dhaqaale ahaan faa'iido u leh shaqaalaheeda, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xadidneyn, qorshooyinka la xiriira amniga goobta shaqada iyo heerarka deegaanka, xeerarka anshaxa, dheefaha daryeelka caafimaadka, dheefaha waxbarashada, dheefaha howlgabnimada, heerarka mushaharka nolosha, iyo gelitaanka heshiis nabadeed ee shaqaalaha oo lala yeesho shaqaalaha. Wadarta Guud: 20 Bog Xadaynta: 10
Aniga: Qorshaha Deegaanka
Codsaduhu waa inuu: (1) bixiyaa ama muujiyaa qorshe lagu dhimayo raad-raaca karboonka, saameynta deegaanka, iyo baahiyaha kheyraadka soosaarka xashiishadda iyo; (2) sharrax qorshe kasta oo loo adeegsado tamarta kale, daaweynta biyaha wasakhda ah oo socda, iyo daaweynta hawada isweydaarsiga. Wadarta Guud: 20 Bog Xadaynta: 10
J: Deggeneyaasha Illinois Ayaa Xukumaya ama La Leh
Codsadaha Soo Kordhinta Farshaxanka waa inuu caddeeyaa in Codsaduhu uu yahay mid deggan Illinois La Xukumaa ama La Leh. Haddii Codsaduhu uusan u dalbanaynin sida Koontaroolka Deganeha Illinois ama La Leh, Codsaduhu uma baahna inuu bixiyo macluumaad dheeri ah Bandhiggan. Haddii Codsaduhu u codsanayo sida Koontaroolka Degganeha Illinois ama La Leh, Codsaduhu waa inuu: keenaa diiwaannada canshuurta ee caddaynaya xarunta inay noqon doonto 51% ay maamusho ama lahaato shaqsi ama shakhsiyaad deggane ka ahaa gobolka Illinois 5-tii sano ee la soo dhaafay. Wadarta dhibcaha: 90 Bog Xadidan: midna
K: Ruug-caddaa Ruug-caddaa ama La Leh
Codsaduhu waa inuu caddeeyaa in Codsaduhu inuu yahay mid Ruug Cadaayaysan ama La Haysanayo. Haddii Codsaduhu Aan La Imanayn Ruug-Dhaqan Ama La Leh, Codsaduhu uma baahan karo inuu bixiyo macluumaad intaas ka badan Bandhiggan. Haddii Codsaduhu u codsanayo sida ruug-caddaa milki leh ama la xakameynayo, Codsaduhu waa inuu: keenaa caddeyn muujineysa in xarunta ay noqon doonto 51% ay maamusho ama lahaato ruug-caddaa, sida lagu qeexay Qaybta 45-57 ee Sharciga Wax Soo Saarka Illinois (30 ILCS 500). Isugeynta Dhibcaha: 20 Bogga Xaddidan: midkoodna
L: Qorshaha Kala-duwanaanta
Codsaduhu waa inuu: siiyaa sheeko abuuraya himilo ah kala duwanaanshaha lahaanshaha, maareynta, shaqada, iyo qandaraas si loo hubiyo in kaqeyb galayaasha iyo kooxaha kaladuwan la siiyo sinnaanta fursadda. Wadarta Guud: 100 Bog xaddidan: Inka badan 2500 erey
M: Qaybta gunnada (ikhtiyaar ikhtiyaar ah)
Haddii ay dhacdo isku dheellitirid ah codsiyeyaasha Craft Grower, Waaxda Beeraha ee Illinois waxay ku abaalmarin kartaa illaa 2 dhibco abaalmarin ah oo la doorbiday laakiin aan looga baahnayn dadaallada qaybaha soo socda: (1) qorshaha gargaarka bulshada, (2) qorshaha kahortagga maandooriyaha , (3) warbixinta bulshada deegaanka / xaafada. Haddii aad gudbineyso Bandhiggan, Codsaduhu waa inuu: sheegaa qaybta (ama qaybaha) ee Codsaduhu diyaariyey jawaab. Qayb kasta iyo jawaabteeda u dhiganta waa in si cad loo calaamadeeyaa. Wadarta Dhibcooyinka: 2 halkii noocba
N: Lahaanshaha Hantida
Codsaduhu waa inuu soo gudbiyaa dukumiintiyo kala duwan iyadoo kuxiran xaalada Codsadaha sida milkiilaha hantida. Haddii hantida goobta la soo jeediyay ay kireyso Codsaduhu, Codsaduhu waa inuu soo gudbiyaa: nuqul heshiiska, xaqiijinta lahaanshaha dhulka, aqoonsiga wixii milkiile iyo / ama deyn bixin, qoraal qoraal ah oo ka yimid milkiilaha hantida iyo / ama milkiilaha mulkiilaha oo oggolaanaya oggolaanshaha xarun farshaxan oo lagu kobciyo dhismaha codsaduhu ugu yaraan illaa Diseembar 31, 2021, iyo haddii ay ku habboon tahay, xaqiijinta ogeysiinta milkiilaha hantida iyo dhammaan amaahda guryaha iyo / ama deyn-bixiyeyaasha kaamil ah in hantida loo isticmaali doono sida xarun kobcinta farsamada ugu yaraan illaa Diseembar 31, 2021, oo ay ku oggolaadaan dulsaar kasta oo deyn ah iyo / ama deyn bixinno kaamil ah. Hadeysan milkiilaha hada laheyn ama uusan kireystan Codsaduhu, Codsaduhu waa inuu soo gudbiyaa: oraah qoraal ah oo ka timid milkiilaha hantida iyo / ama milkiilaha oo cadeynaya ogolaashaha in codsaduhu inuu kiraysto ama iibsado dhulka ujeedada laga leeyahay dhismaha xarun farshaxan ugu yaraan. Diseembar 31, 2021, iyo haddii ay quseyso, xaqiijinta ogeysiinta milkiiluhu si kasta iyo dhammaan amaahda iyo / ama deyn-bixiyeyaasha kaamil ah in guriga loo isticmaali doono xarun farsamo ahaan ugu yaraan illaa Disember 31, 2021, iyo oggolaanshaha tan deyn kasta ama / ama deyn guriyayn leh Haddii guriga uu leeyahay Codsaduhu, Codsaduhu waa inuu soo gudbiyaa: xaqiijinta lahaanshaha dhulka, caddeynta wax kasta iyo dhammaan deymiyada guryaha ama deyn bixiyeyaasha kaamil ah, iyo haddii ay quseyso, xaqiijinta ogeysiinta dhammaan deymiyada guryaha iyo / ama deyn-bixinnada kaamil ah in gurigu leeyahay in loo isticmaalo sidii xarun farshaxan lagu koriyo ugu yaraan illaa Disember 31, 2021; iyo ogolaashahaas wixii deyn ah iyo / ama deyn deyn lagu sameeyay. Xadka bogga: ma jiro
O: Ogeysiiska Soo Gudbinta Haboon
Bandhiggan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood: mid waa inuu buuxiyaa Codsaduhu, iyo mid ay tahay inuu dhammaystiro maamulka soonaha degmada. Labada qayboodba waa in la dhammaystiro.
P: Siideynta Macluumaadka Ururka iyo Shaacinta Maaliyadeed
Codsaduhu waa inuu siidaayaa dhammaan macluumaadka laxiriira maaliyadeed ee laxiriira milkiilaha ganacsiga. Markii laga jawaabayo Bandhiggan, Codsadeyaashu waxaa lagu dhiirigelinayaa inay dib-u-eegaan qeexitaanka “dulsaar dhaqaale” ee xeerarka, iyo Qaybaha 1300.305 iyo 1300.300 (c) (22) - (27). Codsadaha Soo Kordhinta Farshaxanka waa inuu siiyaa:
1. Qaabdhismeedka lahaanshaha ee Kobcinta Farshaxanka, oo ay kujirto boqolkiiba xiisaha lahaanshaha shaqsi kasta ama shirkad ganacsi. Tani waa inay cadeeysaa dhamaan mas'uuliyiinta maamulayaasha iyo hay'adaha ganacsiga ee loo maro hab toos ah ama aan toos ahayn, maamul, lahaansho ama kontorool danaha iyo hantida Codsadeyaasha Kormeeraha Farshaxanka. a. Codsaduhu waa inuu sheegaa nooca shirkad ganacsi ay tahay: milkiile iskaashi, iskaashi, shuraako xaddidan, iskaashato mas'uuliyad xaddidan, shirkad, shirkad deyn xadidan, ama mid kale.
aniga. Milkiileyaasha kelida ahi waa inay bixiyaan magaca, deganaanta, iyo taariikhda dhalashada milkiilaha. ii. Dhammaan iskaashatadu waa inay bixiyaan magacyada iyo cinwaanada dhammaan shuraakada, kuwa guud iyo kuwa xaddidan, iyo dukumiinti kasta oo iskaashi ah. iii. Shuraako xaddidan, iskaashato mas'uuliyadeed oo xadidan, shirkadaha, iyo shirkadaha xaddidan ayaa laga rabaa inay bixiyaan nuqul shahaado ah jiritaanka iyo nuqul ah Shahaadada Joogtada Wanaagsan ee Xoghayaha Xoghayaha Gobolka Illinois, oo la soo saaray 60kii maalmood ee la soo dhaafay. iv. Shirkadaha deynta leh ee xaddidan waa inay bixiyaan nuqul ka mid ah Qoddobada Ha'yadaha iyo liistada xubnaha ka ah shirkadda mas'uuliyadda xadidan iyo macluumaadka lala xiriirayo. v. Shirkaduhu waa inay keenaan nuqul ka mid ah Waxyaabaha ay ka midka yihiin, iyo nuqul kamid ah diiwaangelinta magac loo qaatay oo uu soo saaray Xoghayaha Gobolka haddii ay quseyso. Shirkaduhu sidoo kale waa inay bixiyaan magacyada iyo cinwaanada dhammaan haamaha iyo agaasimayaasha shirkadda.
1. Dhammaan hay'adaha shisheeye waa inay bixiyaan dukumiinti lagu dabaqi karo nooca ay ku qoran yihiin kor ku xusan, oo ay ku jiraan nuqul ah Shahaadada Joogtada Wanaagsan ee laga soo qaatay awoodiisa ku-biiritaanka, iyo koobiga Shahaadada Awoodda ee uu soo saaray Xoghayaha Gobolka ee Gobolka Illinois.
2. Jaantus abaabulan oo hadda ah ee loo yaqaan 'Craft Grower', oo ay ku jiraan sharraxaadaha jagooyinka iyo magacyada iyo dib-u-biirinta dadka xilalka haya Ku dar wixii ah xirfado dheeraad ah, waxbarasho, ama khibrad laxiriirta farshaxan-yaqaanada yar yar ee aan lagu soo darin biilka shaqaalaha.
3. Nuqulada heshiisyada magdhow, heshiisyada maaraynta, heshiisyada bixinta, ama dukumiintiyada kale ee maaliyadeed ee u dhexeeya ama u dhexeeya Codsadaha iyo qof kasta oo dano dhaqaale iyo / ama kontarool liisanka, ay ku jiraan kuwa wax iibiya, milkiilayaasha, iyo saraakiisha, ama sheeko haddii heshiisku waa af.
4. Dukumiinti cadeynaya in Codsaduhu leeyahay ugu yaraan $ 20,000 hantida hantida ah.
5. Nooca iyo nooca deyn kasta oo sarreeya, amaahda, amaahda amaahda, iwm, ee la bixiyay ama la fulinayo, ama la bixiyo ama la fulinayo, iyadoo laxiriirta furitaanka ama hawlgalka soo goosashada farsamo yaqaannada.
6. Bixinta dhammaan ilaha maalgelinta loo isticmaalo si loo helo ama loo horumariyo ganacsiga baayac-mushtarka iyo dukumiintiga maalgelinta noocan ah. Codsaduhu waa inuu ku buuxiyaa xaashiyaha hoose ee shaqsi kasta ama hay'ad lagu aqoonsaday macluumaadka kor ku xusan.
S: Sarkaalka Maamulaha ama Bayaanka siidaynta xubinta
Foomka sarkaalka maamulaha ee Farshaxannimada waa in loo buuxiyaa sarkaal kasta iyo / ama xubin guddiga ka tirsan. Foomkan waa in laga buuxiyo gebi ahaanba in kasta oo ay muuqato suuragalnimada macluumaad nuqul ah.
R. Bayaanka Nootaayada
Codsadaha Farshaxaniistaha Farshaxaniishu waa inuu saxeexo oo nuqul ka bixiyaa qoraal si gaar ah u siiya isaga ama iyadu waxyaabo qaarkood ma qaban doonaan, iyo in macluumaadka ku jira arji-doonka farsamada gacanta inay run yihiin oo sax yihiin.
S: Foomka Oggolaanshaha Faraha faraha
Codsaduhu waa inuu buuxiyo Ogolaanshaha iyo Foomka Ogeysiiska Soo gudbinta Farta oo uu si toos ah ugu gudbiyo iibiyaha iskaanka tooska ah. Foomkan laguma dari karo Arjiga. Codsaduhu ma doonayo inuu wax ka beddelo Magaca Hay'adda Codsashada, Hay'adda Dalbata Aqoonsiga ORI, Codsashada Cinwaanka Hay'adda, ama Beeraha Ujeeddooyinka Foomka.
Sida Loo Noqdo Kobcin Farshaxaneedka Illinois.
Waxaan daboolidoonaa codsiyada u saamaxaya ilaa 150 soo galayaal cusub suuqa suuqa cannabis ee Illinois sannadaha soo socda.
Si looga caawiyo dadka inay ogaadaan macluumaadkan ku saabsan sida loo helo ruqsad u shaqeystayaasha farsamada gacanta - jebiso waxyaabaha aad jeceshahay oo iska qor. Hadda aan ka hadalno khadadka waqtiga iyo waxa galaya dalabka si loo helo rukhsadda. Tani waa nidaam aad u dheer - laakiin haddii aad sii joogtid ilaa dhamaadka, markaa waad ogaan doontaa jawaabta su'aasha "miyaan ku abuuri karaa farshaxan gacanta ku shaqeeya, gambaleel iyo qayb baahin dhammaan dhisme isku mid ah haddii ay iyagu iskood gooni u yihiin iyo Hay'adaha shatiga haysta ?? Hmm… si fiican, aan u helno Dhamaan waxa ku saabsan sida loo helo shatigaaga farsamada gacanta.
Immisa Shati Kireystayaasha Farshaxanimada loo adeegsado ee kuyaal Illinois?
Waaxda Beeraha waa in - taasi tahay mid khasab ah - inay soo saarto ilaa 40 shati xaraashka farsamada gacanta laga bilaabo Julaay 1, 2020, lamana iibin karo shatigaas ilaa laga gaadhayo bisha 21, 2021. Sidoo kale marka la gaadho Disember 21, 2021, waaxda beeraha ayaa soo saari doonta mid kale 60 rukhsad farsamo gacmeedyada xeebta dhexdeeda ah. Wixii ka dambeeya Janaayo 1, 2022, waaxda beeraha ayaa kor u qaadi doonta tirada macaamiisha farshaxanimada waxna ka beddeli karta ruqsadda ruqsadda - laakiin kama badnaan karto in ka badan 150 xaraashleyda gobolka.
Shatiga Farshaxanka 'Craft Growers' - Ruqsad cusub oo loogu talagay beeraleyda cannabis ee ku dhaqan Illinois.
Marka aynu ka hadalno waxa si gaar ah u galaya codsiyada liisanka ee 100-kii ganacsade ee ugu horeeyey ee ku shaqeeya Illinois.
Qaybta 30-10 ee sharciga ayaa daboolaya dalabka. Booqo websaydhkeena qareenka warshadaha cannabis si aad u hesho xiriir aad ku soo dejiso qaybtan si aad u heysato nuqul ka mid ah shuruudaha si looga caawiyo shirkaddaada xashiishadda inay ka furato Illinois.
Codsiga waxaa ka mid ah:
Lacagta aan la soo celin karin ee $ 5,000 - khidmadda liisanka ayaa ah $ 30,000 haddii dalabkaagu yahay mid ka nasiib badan kuwa la soo xulay.
Magaca sharciga ah ee ganacsatada yar yar
Cinwaanka jireed ee la soo jeediyey ee ka ganacsada farsamada gacanta
Magaca, cinwaanka, lambarka amniga bulshada, taariikhda dhalashada sarkaal kasta iyo xubin ka tirsan guddiga farsamada gacanta - dhammaantoodna waa inay jiraan ugu yaraan da'da 21 sano.
Faahfaahinta maamul ama garsoor (maxkamad) ee ka dhaceysa halkaas oo qof kasta oo ka mid ah dadka laga doonayo shuruuda 4 inuu ballanqaaday dambiile, ama lagala noqday ruqsad ama laga joojiyay.
Nuqul la soo jeediyay oo ka mid ah shuruucda oo ay ka mid yihiin habraacyada kormeerida milkiilaha farsamada gacanta, oo ay ku jiraan horumarinta iyo hirgelinta nidaamka korjoogteynta dhirta, haynta diiwaangelinta saxda ah, qorshaha shaqaaleynta, iyo qorshaha amniga ee ay ansixisay Waaxda Booliska Gobolka oo fulisa xeerarka qodobbada waaxda Ag-soo socota. bisha Oktoobar 2019- Tilmaanta jirka ayaa laga sameyn doonaa dhirta asbuuciiba iyadoo la adeegsanayo farshaxan yaqaanka.
-see, waa sababtaas tan aan dadka ugu idhiyay in qarashyadu sarreeyaan, meherado badan ayaa furmaya, iyagu ma goynayaan dhammaan dokumentiyadaan xukumadan KA HOR xitaa in ay helaan rukhsadda in loo furo meheradda - sidaas awgeed waa sababta ay la-taliyayaashu u dallici doonaan tobanaan. haddii aysan boqolaal kun oo doolar ka caawinaynin meheraddaada inay hesho rukhsaddeeda si ay ugu koraan Illinois, markaa fadlan weydii iibiyaashaas haddii ay leeyihiin waajibaad shaqo oo aamin ah - sida qareenkaagu qabo. Hadda dib ugu noqo dhammaan shuruudaha.
Xaqiijinta booliiska gobolka in dhammaan baaritaannada taariikhda asalka ah ee saraakiisha, xubnaha guddiga, iyo wakiillada aasaaska ganacsiga cannabis la qabtay
Nuqul ka mid ah orgindace-ka maxalliga ah ee hadda jira ama oggolaanshaha iyo caddeynta in milkiilaha howsha lihi uu waafaqsan yahay qawaaniinta aagaggaaagga ee maxalliga ah
Ku dhaqanka shaqooyinka la soo jeediyay - buugga loogu talagalay shaqaalaha - oo muujinaya qorshe wax qabad si loogu wargaliyo, loo shaqaaleeyo oo waxbarro dadka laga tirada badan yahay, haweenka, halyeeyada iyo dadka naafada ah, in lagu dhaqmo dhaqanka cadaaladda ee shaqaalaha lana siiyo ilaalin shaqaalaha.
Muuji khibrad ku saabsan ama habab ganacsi oo kor u qaada xoojinta dhaqaalaha ee meelaha sida xun saameynta ugu leh.
Khibrad ku saabsan abuurista ag biz ama howlaha beeraha
Sharraxaadda ku lifaaqan, xarun xiran oo xashiishadda lagu abuuri doono, la goosan karo, la soo saari karo, la baakadeyn karo, ama haddii kale loo sii diyaarin doono qaybinta ururinta fidinta.
Sahan lagu sameeyay xirxiran, xirid xiran oo ay kujiraan meel u sii dheer beerista
Beerista, ka baaraandegida, qorsheynta alaabada iyo baakadaha,
Sharraxa waaya aragnimada codsadaha ee farsamada wax soosaarka beeraha iyo heerarka warshadaha.
Liiska darajooyinka, shahaadooyinka, ama khibradda laxiriirta ee dhammaan saraakiisha ganacsiga mustaqbalka, xubnaha guddiga iyo waxyaabaha ganacsiga la xiriira
Aqoonsiga qofkasta oo leh dano dhaqaale ama cod bixin ah 5% ama ka weyn
Qorshe qeexaya sida uu ganacsadaha u wajahayo mid kastoo ka mid ah waxyaabaha soo socda:
Baahida tamarta - iyo korsashada isticmaalka tamarta waarta
Warka biyaha iyo isticmaalka biyaha waarta ama siyaasadaha ilaalinta
Maareynta qashinka iyo siyaasada yareynta qashinka
Qorshe dib-u-warshadayn oo loogu tala galay soo iibsigooda, haad qashin dib loo isticmaali karo, ama qashin xashiishad
Dheeraad ah - dhammaan qashinka xashiishadda waxaa loo samaynayaa si aan caadi ahayn oo loogu guray qashinka kale ee lagu ridi karo qashinka.
Maxey qasab tahay inuu farsamo yaqaanku sameeyo si uu u haysto liisankiisa?
Ka go'antahay in la raaco qodobada qashinka maxalliga ah - iyo in la ilaaliyo dhammaan shuruudaha deegaanka iyo federaalka ee ay ka mid yihiin - ku keydinta qashinka dabiiciga ah alaabada ka soo baxa xashiishadda cannabis.
Balanqaadka heerka tikniyoolajiyada ee wax ku oolnimada kheyraadka xarunta farsamada gacanta - macnaha
Beeraleyda xeeladdu waxay wacad ku martay inay si hufan u isticmaasho kheyraadka - oo ay kujirto quwadda iyo biyaha beeritaanka xashiishadda ayna la kulanto ama dhaaftay shuruudaha farsamada ee loogu talagalay
Waxay kuxirantahay cabirka qolka shiraaca nooca HVAC ee la isticmaalo
Waxaa ku jira nidaamka waraabinta otomaatiga ah
Cabbir socodka biyaha ee nidaamka.
Macluumaad kasta oo kale oo sharcigu u baahan yahay.
Fiiri - quruxsan toos u soco. Sheeko dhaadheer - qoraallo farshaxanka korodhka ah ayaa kugu qaadan doona waqti dheer waana sababtaas sababta lataliyayaashu u joogi doonaan inay kaa iibiyaan sida ay wax u qabtaan iyo sababta ay u shaqeyso, laakiin intaadan taas sameynin fadlan fadlan fiiri sida loo fulin doono codsiyada. .
Araajida Codsiyada Koritaanka Farshaxanka ee Illinois
Waxaan u jeednaa Qeybta 30-15 ee Sharciga Kordhinta Farshaxanka si aan u helno sida dhibco loo helo. Qodobbada sifiican looma shaacin, laakiin waxaan ku sameyn karnaa xisaab ka-dhigista xagga qiyaasta 78% ee dhibcaha aan si toos ah loo sharixin.
Ku habboonaanta xarunta la soo jeediyey
Amniga iyo keydinta diiwaanka
Amniga badeecada iyo qorshaha sumadaynta
Heerka codsadaha ee codsadaha sinnaanta bulshada - marka fiidiyowgaas la sameeyo - xiriiriyahaas isla halkaas ayaan gelinayaa. - tani waa markii ugu horreysay ee nambarada la bixiyo, wax aan ka yarayn 20% dhibcaha la heli karo taga qaybtaan - markaa ugu yaraan 20% go'aanka waa kan, iska indhatir halistaada haddii aad rabto shatiga.
Dhaqanka shaqada iyo shaqada - oo aan ka yarayn doonin 2% illaa dhibcaha guud ee la heli karo - taasi waa 10x ka yar khatarta in la iska indha tiro marka loo eego sinnaanta bulshada, laakiin weli waxay leeyihiin dhaqanno shaqo oo wanaagsan,
Qorshaha deegaanka ee ku saabsan hawlgalladaada beero sida HVAC, H20, hufnaanta tamarta iyo qorshayaasha teknolojiyadda.
Kordhinta farshaxanka ayaa ka badan 51% oo uu leeyahay degane Illinois ah
Korodhka farshaxanku wuxuu ka badan yahay 51% oo uu leeyahay ama uu xukumo halyeey
Qorshe kaladuwan oo ay kujirto sheeko aan ka badnayn 2,500 oo erey oo dejinaya yoolkaaga kaladuwanaanshaha lahaanshaha, maamulka, shaqada iyo qandaraas gelinta
Wax kasta oo kale waaxda ag ag ayaa u dejin kara qaanuunka dhibcaha
2 dhibcood oo abaalmarin ah oo loogu talagalay qorshaha codsaduhu inuu la shaqeeyo bulshada, laakiin tan waxaa la siiyaa oo keliya haddii codsiyada gobol gaar ah lagu xidho.
Haddii aad guuleysato - ka dib qorshe kasta oo lagu daro codsiyadaada kobcinta farsamada waxay noqoneysaa shuruuddaha shatiga - ku guuldareysiga inaad u hogaansanto siyaasadahaaga iyo nidaamkaaga ayaa daaha ka rogaya in farshaxankaaga uu koray khatarta ah inaad lumiso liisanka - markaa waxaad si fiican uga dhigan tahay waxaad ku sheegto dalabkaaga. .
Xaqiiqdii ma rabtaa ruqsad farshaxan korodhsi Illinois?
Haa, waan ogahay - sax? Codsigan waa mid waalan muddo dheer & haddii aad ku guuleysato, ka dib waxay noqoneysaa xaalad liisankaaga. Laakiin hadaad sidan jeceshahay oo aad rabto macluumaad dheeri ah, rukumo kanaalka oo na sii suul ku saabsan waxa ku jira si ay waxbadan uga soo baxaan quudintaada.
Kobcinta Farshaxanka miyaa lagu xiri karaa Dispensary Illinois?
Sida ku xusan bogga 215 ee sharciga - milkiilaha farshaxanku wuxuu la wadaagi karaa aasaasaha alaabada ama qalabka lagu kala iibsado - oo rukhsadahooda la wadaagaan aagagga wadaagga ah sida qolalka sanduuqa, qolalka qadada, musqulaha.
Marka maalin maalmaha ka mid ah farsamada ayaa koraysa xashiishad cannabis oo dhan min abuur ilaa iibsi - waan arki doonaa.
Waad ku mahadsan tahay inaad igu soo biirtay qaybtaan - xasuusnow, sharciyeynta marijuana waa bilo dhawr ah oo kaliya - sidaa darteed bilaw inaad qorsheyaasha isugu keento wax soo saarka. Oo hadaad u baahatid caawimaaddeyda, kaliya google cannabis qareenka oo ila soo xiriir. Nabad gal y'all!